Ciidamo gaaraya 3000 oo loo diyaariyey inay ka howlgaan Degmooyinka Gobolka Banaadir - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Ciidamo gaaraya 3000 oo loo diyaariyey inay ka howlgaan Degmooyinka Gobolka Banaadir
Ciidamo gaaraya 3000 oo loo diyaariyey inay ka howlgaan Degmooyinka Gobolka Banaadir
Wasiirka Amniga ee Xukuumadda Soomaaliya iyo Maamulka Gobolka Banaadir ayaa kulan amni la yeeshay Guddoomiyeyaasha 17-ka degmo ee Gobolka, Taliyeyaasha ciidanka booliska iyo Guddiga abaabulka iyowacyigelinta, kaasoo looga hadlay arrimaha Amniga caasimadda.
Waxaa lasoo bandhigay 3,000 kun oo askari oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan Nabadgelyada Degmooyinka iyo caasimadda Muqdisho, iyadoo lagu soo kordhiyay Degmooyinka Gobolka Banaadir, si ay u xaqiijiyaan amniga.
Wasiirka Amniga ee Xumuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Isloow Ducaale ayaa sheegay in mas’uulka degmo kasta lagula xisaabtami doono shaqadiisa dhinaca amniga magaalada ee loo xilsaaray, iyadoo aan cidna lagala gorgortami doonin sugidda Nabadgelyada.
Wasiirka ayaa sheegay in kormeero joogto ah ay jiri doonaan, 24-ka saacna ay shaqeyn doonaan ciidamada iyo madaxda Gobolka iyo Wasaaradda Amniga si isbedel looga sameeyo xaaladda amniga magaalada Muqdisho.
Amniga G/Banaadir Muqdisho
Madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Waare oo Mooshin xil ka qaadis ah laga gudbiyey (Akhriso)
Taariikhda Cali Khaliif Galleyr